Harowo.com | HarawoNews – Somalia Information & Analysis – Shaqada Culimada Iyo Hiilka Ay Bulshada Ka Mudan Yihiin
Jun 04, 2016 ANALYSIS 0
Hiilku waa wax aad u wanaagsan una wanaagsan dhibbanaha iyo dulmi-falahaba. Oo haddii lagaa awood weyn yahay waxa aad u baahantahay cid kuu hiilisa, hadii aad awood badantayna waxa aad u baahantahay cid kuu hiilisa, oo marnaba kama maarmaysid hiil. Haddii lagaa awood weyn yahay waxa laguugu hiilinayaa taag darradaada, dulmiga iyo xad gudubkana waa lagaa difaacayaa, haddii aad awood badantahay oo aad daandaansi badan tahayna waa laguu hiilinayaa oo qabasho ayaa laguugu hiilinayaa si aanad wax naftaada dhiba u galabsan. Dulmiga ayaa lagaa dhex qabanayaa si aanad gef iyo gar darro dad ugu galaafan.
Iyada oo ay taasi jirto noolaha dunidan ku nooli waxa uu u kala badsaday tamar iyo taag. Jaad kasta oo ka mid noocyada noolaha ah ee dunidan ku guud nooli waxa uu dhibbane u yahay noole kale oo ka awood badan. Noolaha uu Eebbe abuuray waxa ugu garasho liita ma-yeedhaanka, siiba adhiga. Itaal yari ay noole badan ka itaal daran yihiin iyo waliba hiil-la’aan aanay isku hiilin ayaa ay kaga garasho liitaan noole badan oo ku dul nool dhulka. Haddii tiro adhiya oo meel daaqaysa ay dacawo badhtanka ugu soo dhex dhacdo, oo ay neef la hadho, inta kale inta ay isa soo tubaan ayaa ay fiirsadaan oo ay daawadaan sida loo cunayo neefka lagala hadhay. Iyaga oo dhegaha taagaya oo indhaha soo yuubaya misana didsan ayaa ay soo istaagaan meel u dhaw kobta lagu rifayo neefka lagala hadhay. Hiil taag uma hayaan laga yaabaana in ay ka awood badan yihiin midhka dacawada ah eejaalkooda ruugaysa, balse waxayna garasho u lahayn awoodda ay leeyihiin, mana aaminsana quwadda isu taggooda. Xataa ma hayaan xeelad ay ku wajahaan hororka hudhaaya.
Maah maah soomaali ah ayaa tidhaa ” Qudhaanjo ururtay mulac wey jiidaa ” Oo haddii qudhaanjo taagteeda iyo tamarteeda aynu garanaynaa mulac mucdiisa iyo misaankiisa aynu naqaan jiidayso, maxaa adhiga u diiday in ay iska dhiciyaan dacawada la lafaha iyo tafeenaha ah? Dee mooyi! Odhaah kale ayaa iyana ahayd ” Gacmo wada jirbey wax ku gooyaan ” Oo waaba tiro adhiya iyo dacawo kali ahe halkay wax ka si yihiin ? Bal adba! Oo sowtii la odhan jiray “ biyo kaa badan iyo col kaa badanba waa ay ku hafiyaan” odhaahdaasina miyey beenoobi ?! Xaasha ‘e garashaa la is dheeryahay.
Haddaba haddii aynu nidhi noolaha uu Eebbe uumay mayeedhaanka ayaa ugu garasho liita, noolahaas waxa ugu garasho iyo garaad sarreeya basharka. Bini’aadamka ayaa uu Eebbe u dooray caqli aanu siin noolaha inta kale. Eebbe basharka wuu abuuray oo hadaf kaliya ayaa uu ka lahaa in uu u abuuro, garasho ay kaga sarreeyaan noolaha inta kale iyo caqlina waa uu u dooray oo sabab ayaa uu ka lahaa in uu dooradsiiyo hoggaanka garashanimo ee noolaha. Ujeedka ugu weyn ee uu ka lahaana waxa weeye in ay Alle ku gartaan garaadkaas oo ay ku caabudaan, sidoo kalana ay ugu mahadnaqaan galladda garashada iyo ta garaadkaba. Waxa uu U yeelay Rabbi sidan waa in cibaadada loo gaar yeelo oo kaligii ay tahay in la caabudo oo Ilaah iyo Gargaare laga dhigto loona qayshado wakhti kasta oo adag iyo ku kasta oo badhaadhe lagu suganyahayba, lana baryo wakhti kasta oo la jilicsan yahay iyo mid kasta oo la roon yahayba. Xaalad kasta oo aad ku sugantahay cibaadada Eebbe kugu leeyahay waa in aad garataa oo aad gudataa waajibaadkeeda. Waa haddii aad ku garatay garashada Rabbi ku siiyey Rabbinimadiisa ‘e.
Si ujeedka uu Eebbe ka lahaa uumidda basharka ay u gaadho isla basharka laftiisa, Eebbe ergay badan oo wakhtiyo kala duwan uu soo diray ayaa uu u soo dhiibtay farriintiisa. Ergaydaas ayaa uu soo faray in ay dadka ay u soo bandhigaan una bayaamiyaan ujeedka ka danbeeya ahaanshahooda iyo jiritaankooda, dhab ahaanna waa ay guteen waajibkaas uu Eebbe u igmaday oo waa ay faafiyeen farriintaasi loo doortay in ay iyagu xambaaraan intii karaankooda ahayd. Nabi Maxamed (NNKH) ayaa ugu danbeeyey ergaydaas uu Eebbe farriinta culus u soo dhiibtay, isaga ayaana inoo sheegay cidda dhaxalka rususha qaadi doonta ee masuuliyaddeeda xambaari doonta. Waxa uu inoo caddeeyey in culimadu noqonayaan kuwa dhaxlay ee xambaari doona farriinta Rabbi uu u igmaday rususha, dhab ahaanna waa ay xambaareen oo dhib kasta oo ay la soo mareen weynnagaa maanta ku naalloonayna farriinta dhabta ah ee Nabi Maxamed (NNKH) loo soo diray. Ma cidbaan ka dheregsanayn?
Ergay kasta oo ka mid ergaydii uu Eebbe soo dirsaday waxa uu lahaa hal cadaw oo ku lid ah faafka farriinta uu ergaygaasi xambaarsan yahay. Halkaa cadaw waa Ibliis. Ibliis oo dabcan aynu garanaynno cadhada uu ka qabo jiritaanka basharka iyo cadaawadda uu u hayo bini-aadanka. Iblays kaligii ma aha ee waxa uu leeyahay gacanyarayaal iyo kaaliyayaal uu u igmado la dagaallanka dadka aaminsan farriinta Eebbe. Gaalada aan aaminin jiritaanka Ilaah, kuwa aaminsan jiritaanka Ilaah ee wax kale u aaminsan Ilaah, iyo kuwa aanan ogaynba in uu jiro Ilaah ayaa ugu horreeya oo ka kow ah gacanyarayaasha Ibliis. Waxa ay layl iyo nahaar dedaal ugu jiraan burburinta risaaladda uu xambaarsanyahay Islaamku, ujeedkooduna waa in ay guuleeyaan rabitaanka Ibliis oo ah kaga takhalusidda basharka. Taas ayaa ay u heellanyihiin had iyo jeer oo ay cid wal oo farriintan faafisaba dagaal ugula jiraan.
Loollanka ka dhexeeya Ibliis iyo ergaydii Rabbi, dhammaad ma leh, inkasta oo ay dhammaatay noloshii rusushu. Haa, risaaladdii ayaa jirta oo faafaysa ‘e sidee ayuu loollankaasi u yeelanayaa meel uu ku idlaado? Rag baa dunida wali nool ku fara-adag sii jiritaanka risaaladda Rabbi, halgan iyo dedaalna ugu jira sii faafinteeda. Waa culimada (Dhaxal sidayaashii) oo ka dooran dadka inta kale, waxa ay kaga dooranyihiin dhaxalka ay xambaarsanyihiin oo ah kii anbiyada ah,cilmiga ay u yeesheen diinta iyo carrabka ay ku faafiyeenba. Middaas ayaa ay kaga sooc noqdeen umadda inta kale. Culimada marka aan sheegayo waxa ka reebban wadaad-xumaha, kuwa sheegta cilmiga diinta ee aan san lahayn, kuwa ay ka muuqato dushooda madaahirta wadaadnimo balse aanan ahayn, intaasiba waa ay ka reebban yihiin culimada aan carrabka ku taabtay. Dadka ay cabsida Eebbe xalxalisay laabahooda, ee aanay kaliya biyo dhigin, kuwa ku xeeldheeraaday culuumta islaamka isla markaana awood u yeeshay in ay gudbiyaan oo ay faafiyaan, kuwaas ayaan u jeedaa. Iyada oo aynu ogsoonnahay masiladda culimada iyo halka ay inoogu jiraan, sidee ayeynu haddaba innagu ula dhaqannay ? Ma cisaynnay oo ma siinnay sharaftii iyo taageeraday innaga mudnaayeen, mise waa aynu liidnay oo waa aynu cabudhinnay ? Ma yihiin culimadeennu kuwa xorriyad maanta ku hadli kara oo si aanay cabsi ku jirin u faafin kara farriinta Eebbe ? Ma se heleen hiil bulsho iyo mid dawladeed oo ay ku kalsoonaadaan ?
Ma aynnaan siin (culimada) sharaf tay innaga mudnaayeen, mana aynnaan u fidin gacan iyo garab kay innaga istaahileen ee waa aynu wiiqnay halkii aynu uga hiilin lahayn, waa aynu liidnay halkii aynu ka sharfi lahayn. Bal u fiirso sida maanta loo ugaadhsado culimada islaamka loolana dhaqmo. Tusaale aan u soo qaato Khaalid Raashid oo ah caalim ka mid ah culimada Sucuudiga, waxa uu xidhanyahay muddo 11 sannadood ah, laga soo bilaabo 2005. Sababta uu u xidhan yahay maad garanaysaa ? Waxa uu u xidhan yahay hiil uu u fidiyey nabi Maxamed (NNKH), keliya intaas ayaa uu u xidhanyahay. Gef miyuu galay tolow ? In ka badan tobonnaan boqol oo wadaad ayaa iyaguna u xidhan arrin sidan oo kale ah, cidda xidhay ee ay jeelashooda ku jiraanna waa isla kuwii ay ka sugayeen garabka iyo gacalnimada! Cidda xidhayna waa gacanyare u garbinaya gacanyarayaashii Iblayska.
Tusaale kale u soo qaado sheekh Aadan Cabdiraxmaan (Aadan-sunne) oo ah mid ka mida wadaaddada Soomaaliyeed kuwa ugu cod karsan uguna dhiirran xagga faafinta diinta. Waxa uu isna xidhanyahay muddo 30 cisho ku aaddan. Laga soo bilaabo 2/5/2016 ilaa maanta oo ay bisha lixaad tahay 1 sanadda 2016. Sababta uu u xidhanyahay muddada intaa le’eg cidi isma weyddiin, ciddii xidhay ee xorriyaddiisa ka xayuubisayna ma aysan keenin wax caddayn ah oo ka danbaysa xidhitaankiisa, kaliya waa uu iska xidhanyahay. Ma heleen haddaba wadaaddadu xorriyaddii ay mudnaayeen in la siiyo ? Ma se u xornoqdeen gudbinta farriinta Rabbi iyo faafinta diinta islaamka ? May xorriyad umay helin! Sheekh Aadan-sunne xilli la soo dayn doono ma ogi ee Eebbe ayaa innaga og, war iyo wacaal wax uu ku suganyahay iyo si loola dhaqmana Alle ayaa inooga xogogaalsan, waxaynu se u rejaynaynaa in uu xorriyaddiisa u helo sida ugu fudud uguna dhaw. Cid ilaa hadda u dhaq-dhaqaaqday oo u muujisay hiil cad oo ah kii uu innaga mudnaana lama hayo. Culimo iyo caammo cid kor u dhawaaqday oo codkooda gaadhsiisay ciddii xidhay lama hayo, hadii ay jiraanna waa saddex ilaa todoba qof. Oo miyeynaan sidii adhiga ahayn ? Midkeenna xaqdarrada lagu rifay maxaynu ugu hiilin weynnay oo aynu u garab istaagi weynnay ? Sow kama liidanno ma yeedhaankii isku hiishan kari waayey ? Haa waa aynu ka tamar iyo tag darraynnay intaynu ahayn oo qudhaanjada ayaa ina taag dhaanta!
Maaha Aadan-sunne oo kaliya ee tobonnaan wadaad ayaa xorriyad u la’ noloshooda, tobonnaan kale ayaa cabsi iyo baqdin joogto ah la nool oo qoysaskoodii iyo xaasaskoodii xorriyad ula noolaan kari la’. “Maalinkii dibiga cad la cunay ayaa lay cunay” Sow kumuu cataabayn dibigii casaa? Maalinkii sheekh hebel la xidhay ee xorriyaddiisii laga qaaday ayaa anna lay xidhay waxba yaanay ku ciishoon culimada maanta isku daawanaysa xadhiggu. Awoodda ay culimadu bulshada ku dhex leeyihiin waynu ognahay, taageerada iyo garabka ay ku leeyihiinna waa aynu garanaynnaa, balse iyagii ayaa dacar laysku mariyey oo aan isba eegi karin. Xaqii kuma aysan heshiin, hayb culimanimana kuma aysan heshiin, mid kale oo ah cabsida Rabbi iyo caddaaladna kuma aysan mid noqon. Markan (markay heshiin waayeen) ayaa la haleelay oo laga awood roonaaday.
Si kastaba ha ahaato ‘e waxa aan ku rejo weynahay oo aan ka codsanayaa taliyayaasha ciidanka Soomaalilaan in ay dib u eegaan sababta ay u soo xidheen sheekh Aadan Cabdiraxmaan, maxkamadaha magaalada Hargeysa ku yaal, ta gobolka iyo sarena waxa aan ka codsanayaa in ay dib u eegis ku sameeyaan xadhiga sheekha, amarna ay ku bixiyaan in la horkeeno maxkamadda lana caddeeyo sababta iyo ujeedada laga lahaa xadhigiisa. Eed wixii uu leeyahay ha la sheego si loo gaadho xal. Xadhig ha noqdo haddii uu mutaystay, ama xorriyada ha noqdo waaba sida uu mudanyahaye.
Ugu danbayn bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan bulshada Soomaalilaan waxa aan fari lahaa in ay u dhug yeeshaan waaqica ay ku noolyihiin, waxa aanan kula talin lahaa in ay hiil u muujaan cid alla ciddii xaqdarro lagu xidho. Waan u damqanayaa dalkayga, maamulkiisa iyo masuuliyiintiisu sida ay u dhaqmaan waan u dareen-saluugsamaa haddii ay dulmi iyo xume ku kacaan. Waanan ka xumahay boqolaal iyo kumanaan jeer hababka loo xidho culimada iyo dadka sharafta ku dhex leh umadda. Alle xaqa ha ina garadsiiyo hana ina waafajiyo tubta iyo toobiyaha saxda ah.
W/Q: Cabdiwali Yaasiin Maxamed ( Fayr)
Aadan Cabdiraxmaan Aadan-sunne, awood, Khaalid Raashid, Sheekh Aadan-sunne
Prof Samatar Wuu Ku Khaldanyahay Bishii Ramadan oo Usbuuc Wax Ka Yari Ka Hadhay Inuu Ugu Cadhoodo Jaamicadda Ugu Weyn Somaliland Heesba La iga Diiday DAAWO Muuqaalka:- Prof Samatar Raaligalin Waa Inuu Siiya Jaamicadda Camuud Ceeb Maaha Lectureka Jeedi oo Heesaha Inagada